Real Madrid Oo U Soo Baxday Siddeed Dhamaadka UEFA Champions League +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Real Madrid Oo U Soo Baxday Siddeed Dhamaadka UEFA Champions League +SAWIRRO
Kooxda koobka Champions League difaacanaysa ee Real Madrid ayaa u soo baxday siddeed dhamaadka tartankan kadib markii ay 2-1 ku soo garaacday toban ciyaartoy oo kooxda PSG ah. Real Madrid ayaa wadarta labadii kulan ee wareega 16ka kooxood ee UEFA Champions League ku soo baxday 5-2 waxayna tartankan ka cidhibtirtay kooxda PSG oo uu kaadhka cas ka qaatay Marco Varratti oo markii saddexaad UCl kaadhka cas lagu siiyay.
Paris Saint-Germain oo ay markale muhiimadeeda kowaad ee xili ciyaareedkan ay ahayd in ay guul ka gaadho UEFA Champions League ayaa fashil iyo waji gabax wayn la kulantay iyada oo Real Madrid ka soo gudubtay imtixaan adag iyada oo muujisay in gabi ahaaba ay tahay koox kale marka ay ciyaarayso koobka ay rekoodhka ku haysato ee UCl.
Cristiano Ronaldo iyo Casemiro ayaa Real Madrid guushan ku soo hogaamiyay iyada oo Cavani uu dhaliyay gool iska nasiib ahaa balse aan xataa kooxdiisa PSG waxba u tarin. Real Madrid ayaa iyo Liverpool ayaa noqday labadii kooxood ee ugu horeeyay ee booskooda siddeed dhamaadka xaqiijistay.
Real Madrid ayaa qaybtii hore ee kulankan awooday in ay xaalada ku adkayso kooxda in ay soo laabato u dhaarsanayd ee PSG waxayna kooxda uu hogaaminayo Zidane Zidane ay ahayd kooxda fursadaha ugu badan heshay qaybtii hore ee ciyaarta isla markaana waxay PSG qaybtii hore ku fashilantay in ay samayso wax qabadkii laga filayay.
Inkasta oo uu Zidane kaydka uga tagay xidigaha muhiimka ah ee Kroos iyo Modric oo uu ka cabsaday in ayna boqolkiiba boqol diyaar u ahayn kulan sidan u cadaadis badan ayay haddana Los Balancos qaybtii hore soo bandhigtay qaab ciyaareed aad muhiim ugu ahaa iyada oo PSG u diiday in ay wax goolal ah dhaliso.
Karim Benzema iyo Sergio Ramos ayaa qaybtii hore helay fursadii ugu fiicnayd ee gool dhalineed iyaga oo aad ugu dhawaaday in ay Los Blancos u dhaliyaan goolal ay culays badan ku sii saari kareen laakiin Kylian Mbappe ayaa fursad cadaan ah kooxdiisa ka lumiyay isaga oo halkii uu Cavani kubbada goolka u hormari lahaan si toos ah Navas u toogtay taas oo laga badbaadiyay.
XOGTA QAYBTII HORE EE CIYAARTA:
Real Madrid iyo PSG ayaa qaybtii hore awoodi waayay in ay goolal dhaliyaan laakiin mid kastaaba waxay samaysay laba bartilmaameed oo goolka ah laakiin Real Madrid ayaa sidoo kale laba darbo oo kale la seegtay goolka PSG taas oo la micno ah in ay 4 darbo ku gantay goolka PSG si ay goolka furitaanka u hesho.
Laakiin Real Madrid ayaa ahayd kooxda qaybtii hore fursadaha ugu badan ee ugu halista badan abuurtay halka PSG ay boqolkiiba 57% ku saraysay boosishanka ciyaarta waxayna Los Blancos haysatay boqolkiiba 43% laakiin khibrada Madrid ayaa ahayd waxa garoonka laga dhex dareemayay iyo deg dega badan ee khal khalka galinayay ciyaartoyda PSG.
PSG ayaa 313 kubbadood isku dhiibtay qaybtii hore halka Real Madrid ay 236 baas isku dhiibtay laakiin wax walba oo ay labada kooxood iskugu dayeen in ay goolal ku dhaliyaan ayaa fashil ku dhamaaday taas oo keentay in qaybtii hore barbaro gool la’aan ah lagu kala nastay taas oo la micno ahayd in Real Madrid ay talaabo kale sare ugu sii qaaday wareega siddeed dhamaadka.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Real Madrid soo laabtay iyada oo doonaysa in ay fuliso qorshe ay ku hanaado PSG isla markaana ay kula timaado goolal ah ciyaarta ku dili karto halka PSG ay raadinaysay dariiqii ay shabaqa Madrid ku gaadhi lahayd.
DAQIIQADII 51 AAD Alla Muxuu Gool Ahaa! Boqorka UEFA Champions League ee Cristiano Ronaldo ayaa gool cajiib ah oo madax ah u saxiixay kooxdiisa Real Madrid kadib markii uu Marco Asensio shaqo cajiib ah ka soo qabtay dhinaca bidix waxaa bahdilaad la kulmay Dani Alves oo lugihiisa laga soo saaray kubbada ka hor intii aanu Lucas Vázquez caawinta u samayn Ronaldo waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Real Madrid hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Goolkan ayaa xanuun iyo murugo badan ku abuuray PSG oo looga baahnaa in laba gool ay la timaado si ay u soo baxdo wuxuuna goolkan sabab ugu noqday in 3 gool laga doono si ay waqti dheeri ah u gayn karto ciyaarta halka Real Madrid uu goolkani siiyay fursad wayn oo ay kalsooni ku sii heshay.
DAQIIQADII 60 AAD PSG ayaa ugu dhawaatay in ay goolka barbaraha keensato kadib markii uu Berchiche uu kubad halis ah soo hormariyay goolka Madrid waxaana si aan isfahan lahayn hal mar kubbada ugu wada booday Navas iyo Ramos laakiin kubbada ay PSG goolka ku dhalin kartay ee banaanka taalay uu Varane si fiican iskaga saaray.
DAQIIQADII 66 AAD Xaalada PSG ayaa murugo kale isku badashay markii kaadhka cas loo taagay Marco Verratti kaas oo isaga oo kaadhka digniinta ah haysta garsooraha garoonka ku dhex baacsaday isaga oo ka gadoodsanaa in aanu u qaban qalad laga galay laakiin garsooraha ayaa ugu jawaabay kaadhka digniinta ah ee labaad iyo waliba kaadhka cas oo loo raaciyay waxaana PSG oo markii horeba xaalad adag ku jirtay lagu soo yareeyay 10 ciyaartoy.
DAQIIQADII 69 aad Marco Asensio ayaa birta u garaacay PSG isaga oo ugu dhawaaday in uu goolka labaad u keeno Real Madrid balse waxa uu arkay darbadiisa oo birta goolka ka booday oo banaanka ubaxday.
DAQIIQADII 71 AAD PSG ayaa heshay goolka barbaraha kadib markii ay kubbad gantaal ah oo uu madaxa ku darbeeyay Pastore ay ka soo booday dhinaca goolka Madrid laakiin kubbada ayaa ku dhacday Cavani waxayna sidaa ku gashay goolka iyada oo ciyaartu noqotay barbaro 1-1 ah.
Zidane ayaa markiiba shaxdiisa isbadal ku sameeyay wuxuuna khadka dhexe ku soo xoojiyay Toni Kroos isaga oo saaray Kovavic halka uu waqti kadib ciyaarta soo galiyay Garth Bale wuxuuna saaray Karim Benzema halka PSG ay kaga jawaabtay in Juan Draxler ciyaarta la soo galay waxaana baxay Di Maria oo aan saamayntii laga filayay yeelan.
DAQIIQADII 80 AAD Real Madrid ayaa ugu danbayn PSG si rasmi ah ugu quus goysay kadib markii uu Carlos Henrique Casimiro uu dhaliyay goolka is kabba raaciyay baaqigii PSG ka sii hadhsanaa kadib markii uu caawin ka helay Cristiano Ronaldo, waxayna ciyaartu noqotay 2-1 ay Madrid hogaanka ciyaarta ku dheeraysatay.
DAQIIQADII 82 AAD Cristaino Ronaldo ayaa birta u garaacay PSG isaga oo wax yar u jirsaday in uu dhaliyo goolka saddexaad ee kooxdiisa Real Madrid iyo goolkiisa labaad ee ciyaarta laakiin waxa uu arkay kubbada oo birta goolka ku dhacday.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-1 ay Real Madrid ku soo garaacday toban ciyaartoy oo PSG ah iyada oo tikidhka u goosatay siddeed dhamaadka tartanka ay laabdii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay ku soo guulaysatay ee UEFA Champions League.